Laamaha ammaanka oo gacanta ku dhigay wakiilka deegaanka hoose ee Sololo oo baxsad ahaa | Star FM
Home Wararka Kenya Laamaha ammaanka oo gacanta ku dhigay wakiilka deegaanka hoose ee Sololo oo...
Laamaha ammaanka oo gacanta ku dhigay wakiilka deegaanka hoose ee Sololo oo baxsad ahaa
Wakiilka deegaanka hoose ee Sololo ee ismaamulka Marsabit Halkano Konso ayaa isu soo dhiibay agaasinka waaxda dambi barista dalka ee DCI-da.
Laamaha amaanka ayaa maalmihii la soo dhaafay ku raad joogay Mr. Konso oo baxsad ahaa iyadoona markii gacanta lagu dhigay loo gacan geliyay waaxda qaabilsan la dagaalanka argagixisada ee ATPU si su’aalo dheeraad ah loo waydiiyo, ka hor inta aan la horkeenin maxkamadda isaga iyo eedeysanayaal kale.
Wakiilka ayaa lala xiriirinaya keenista hub dhawaan laga qabtay deegaanka Elle borr ee waqooyiga ismaamulka Marsabit oo loogu tala galay dhinacyo ku dagaallamaya xuduudda deegaannada Turbi iyo Sololo ee ismaamulkaasi.
Afar tuhmane oo labo ka mid ah ay ahaayeen sarakiil ka tirsanaa dowladda ismaamulkaasi ayaa toddobaadkan gudihiisa waxa xiray saraakiisha waaxda ilaalada xuduudaha ee (BPU) iyagoo sida hub sharci darro ah iyo raashin.
Gaariga ay ku sideen hubka ayaa la sheegay inay u wadeen xadka deegaanadaTurbi iyo Sololo oo dagaal beleedyo ka dhacaan.
Dambi baarayaasha ayaa caddeeyay in baabuurka dowladda ay afarta tuhmane adeegsanayeen uu ku jiray gacanta wakiilka islamarkaana isaga lagu ogaa.
Previous articleHowlgalo laga sameeyay buuraleyda Puntland
Next articleNin xaaskiisa afar sano ka hor gacanta ka jaray oo 30 sano xabsi lagu xukumay